एकताबाट पछि हट्नु जनमतविरुद्ध जानु हो « News of Nepal
नेता नेकपा माओवादी (केन्द्र)
शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता हुन्। जाजरकोटमा रहेको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेका उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिन्छन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत भएका उनी एमाले र माओवादीबीचको एकता सम्भव भएको बताउँछन्। उनी एकतामा अलमलिएको भनेर मानिसहरूले गरेको आलोचना पनि स्वभाविक मान्छन्। एकता हुँदा एमाले वा माओवादी एक अर्कोसँग विलय नहुने र जनताको चाहनाअनुसार एकताको सन्देश जाने तर्क गर्छन्। एकतापछि समग्र देशको भावी रणनीति तयार हुने बताउँछन्। माओवादीले चलाएको जनयुद्ध स्वभाविक भएको ठान्ने उनी जनयुद्धको परिणामस्वरूप नै संविधानसभाको निर्वाचन भएको, गणतन्त्र आएको र जनताको हक अधिकार स्थापित भएको दाबी गर्छन्। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले असहज अवस्थालाई मिलाउनु, आइपरेका चुनौतीलाई समाधान गर्नु र वातावरणलाई सहज बनाउनुभन्दै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको बताउने उनीसँग गंगा बरालले गरेको समसामयिक कुराकानी –
एकै खालका विचार र सिद्धान्त मिलेका पार्टीहरुबीच एकता भई सहकार्य गरेर जाँदा कसैको अहित हुँदैन ।
एकतामा जाँदा सबैका आफ्ना सिद्धान्त , विचार र दृष्टिकोणको सम्मान हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रि«यसभाको निर्वाचन पनि सकिएको छ अब देउवाजीले सजिलै ढंगले ‘रिजाइन’ गर्नुपर्छ ।
तपाईंलाई के लाग्छ त्यो भन्नुहोस् न। हिजो पुराना पार्टीहरूले पनि परिवर्तन त चाहेकै थिएनन्, किन सकेनन् र भएन यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ उनीहरूले। यदि हिजोको प्रतिनिधिसभामा बहस गरेर संविधानसभाको निर्वाचन हुन्थ्यो र संघीयता आउँथ्यो ? संविधानसभामा जाने भन्ने विषयमा नै सहमति नहुँदा पटकपटक गरिएका वार्ताहरू असफल भएका हुन् यसलाई पनि गहन ढंगले बुझ्नु जरुरी छ। जनताको चाहना पूरा गर्न वैकल्पिक बाटो रोज्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो। माओवादीले आफ्नो एजेन्डा छोडेको छैन, जे गर्न बाँकी छ भावी दिनमा पूरा गर्छौं। समयअनुसार एजेन्डालाई पनि परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै लान्छौं। संविधानसभामा कुरा मिलेको भए २०६० सालतिरै युद्धविराम हुन्थ्यो।
के कांग्रेसले यो परिवर्तन चाहँदैन ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नभएको र नचाँहिदो कुरा मागेर माओवादीले बढी भाउ खोज्यो भन्ने शब्दमा सत्यता छैन।